Isiphandla sezikhali saseNorth West
Lona kuphela iChild of Arms kusuka kunoma yiziphi izifundazwe zaseNingizimu Afrika ezibhalwe ngokucacile ngemibala futhi ngandlela-thile izinhlobo zefulege kazwelonke, ezasetshenziswa ngo-27 Ephreli 1994. Isifundazwe saseNorth West sasisungulo esisha lapho izindlu zakudala 'ezizimele' zihlanganiswa emuva eNingizimu Afrika emva kokhetho lwentando yeningi lokuqala ngo-1994.
IsiFundazwe saseNorth West Coat of Arms sinesisekelo esibanzi nesiqubulo - KAGISO LE TSWELELOPELE - okusho ukuthula nokuchuma. Ngaphezulu kwesisekelo esiluhlaza kukhona isihlangu esinomgodla wamanzi enqolobane. Insimu yezihlangu ihlukaniswe emigodini ebomvu ngenhla nangezansi, kwesibhakabhaka kwesobunxele nangakwesokudla, okuphakanyisiwe yisiphambano esibhakabhakeni esivumelwaneni esiphezulu esimhlophe.
Esikhathini esiphambanweni kukhona i-lozenge (i-square diagonal), futhi i-green, ne-calabash maphakathi. I-calabash imelela isiko lesi-Tswana esizwe sakwaMashuthatswana naseNyakatho-West. Isihlangu sisekelwa yi-antelope yomhlabathi amabili. Ngaphezulu kwesihlangu i-circlet ehlanganiswe ngesiliva nge-sunflower ehleli ngezimpondo zesiliva zesiliva.
I-sunflower imelela ezolimo esifundeni, lapho kubhekiswa khona ukushisa kwelanga. Iphinde imele ukukhanya kwelanga okudingekayo ukukhiqiza izitshalo.
Isibonakaliso Sezilwane - Inkolongwane (Hippotragus Niger Niger)
I-antelope yamathambo iningi kakhulu i-grazer, edla ikakhulu utshani, kodwa ngezinye izikhathi bayodlulisa amehlo. I-sandy isilwane semfuyo, ngokuvamile esiyi-matriarchal. Ukumaketha kwazo, (izimpawu ezimhlophe nezibomnyama) kubonisa ukuhlukunyezwa, ikakhulukazi lapho izingane zabo zikhathazekile khona.
Ngesikhathi sokukhula, izinkunzi ezinamandla zizoxosha izinkunzi ezincane emhlambini. Ukulwa phakathi kwezinkunzi phakathi nalesi sikhathi ngezinye izikhathi kuphelela ukulimala okubulalayo. Uma ubonisa ukuhlukumezeka, izinkunzi zezinyosi, uphonsa izimpondo zazo kumagatsha ezihlahla. Amapulangwe amakhulu ezimpondweni enza umsindo we-rasping.
Ukubeletha sekuyizinyanga eziyisishiyagalolunye, lapho amathole ezalwa phakathi kukaFebruwari noMashi. Amathole athululwa cishe ezinyangeni eziyisithupha.
Isibonakaliso Sembali - Ujikanelanga (Helianthus Annuus)
I-sunflower, evela emndenini we-Asteraceae, isitshalo saminyaka yonke, esingakhula sibe ngu-3 m ubude. Inhloko enkulu yephuzi efana ne-daisy ephuzi inesisindo sobubanzi obungama-30 cm.
Izimbali zilandelela ukunyakaza kwelanga ngokuguqula ubuso babo ekubhekeni kwelanga empumalanga ukuya empumalanga. Ama-sunflowers yisitshalo esibalulekile eNingizimu Afrika ekukhiqizeni amafutha yemifino.
Esifundazweni esenyakatho-ntshonalanga, kuthiwa imbewu isetshenziselwa ukwenza isinkwa nesiphuzo esifana nekhofi.